Iintyatyambo zaseJapan-Ezona zibonwa kakhulu kwiitattoo | Ukuzoba
Iitattoos zeentyatyambo eziphambili zaseJapan
USusana godoy | | Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo
Zininzi Iintyatyambo zaseJapan, Kodwa bambalwa kuphela abonyuliweyo ukuba babe yinxalenye yeetattoos ezinkulu. Kungenxa yoko le nto namhlanje siza kukubonisa ukhetho lwazo kwaye, ewe, iintsingiselo zazo. Iintyatyambo zihlala zinophawu lwazo kwaye iminyaka emininzi besizisebenzisa ukubonisa iimvakalelo.
Ke xa sithetha Iitattoo zeentyatyambo, besingenakushiyeka ngasemva. Inkqubo ye- ulwimi lweentyatyambo, kuthiwa yenzeka eMpuma. Kancinci kancinci iyasasazeka kodwa iintsingiselo zayo ezinkulu kunye nemiyalezo efihliweyo zihlala zigcinwa. Namhlanje sizifumana ngezantsi!
1 Ezona ntyatyambo zibonakalayo zaseJapan kwiiTattoos
1.1 Intyatyambo yeLotus
1.2 ukuqhama kweetsheri
1.4 Intyatyambo iAmaryllis
Ezona ntyatyambo zibonakalayo zaseJapan kwiiTattoos
Inkcubeko yaseJapan kunye namasiko ayo ahambelana kakhulu nendalo. Kungoko kungamangalisi ukuba iintyatyambo ziyinxalenye ephambili yako konke. Mamaxesha amaninzi, Iintsingiselo zinxulunyaniswa neenkolelo zonqulo, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, xa kufikwa ekufumaneni itattoo eneentyatyambo zaseJapan, sinokuhlala siyinika intsingiselo entsha kwaye siyenze ibe yeyakho.
Enye yeentyatyambo ezithandekayo nezifunwayo kule tattoo yile Intyatyambo yelotus. Olunye lweempawu ezintle zobuBuddha, kuba kusitsho njalo imele ubomi bukaBuddha. Ubomi obuphawulwe ngobunzima kodwa kunjalo, ukwazile ukoyisa. Ke, intyatyambo ye-lotus inentsingiselo yomzabalazo, kunye nokugqibelela nenyaniso. Asinakulibala ukuba enye yeentsingiselo zayo ikwinyulu phakathi komzimba nomphefumlo. Ewe kunjalo, iintsingiselo ezinje ngobuhle kunye nobuhle ziye zafunyanwa.
Ukuqhama kweetsheri yenye yeentyatyambo ezithandwa kakhulu eJapan. Kule meko, mhlawumbi kungenxa yokudityaniswa kwemibala yayo kunye nobukho bayo obufutshane. Inokubonwa kuphela ngexesha elifutshane lonyaka. Into esoloko ilusizi kuba ubuhle bayo buzalisa yonke indawo. Ke, intsingiselo yayo inxibelelene nale nkqubo. Bufutshane kangakanani ubomi, ukuhamba ngokukhawuleza kwexesha okanye ubuhle bobufazi, kunye nokunyaniseka.
Ngaphandle kwamathandabuzo, peony Ikwasikhukulisa ngemibala yayo emihle. Kwakhona ubuhle beentyatyambo buhlanganisene kwinto yonke uhlobo lweetattoos. Ukongeza, nangona zihlala ziphakathi koyilo olukhulu, zininzi iindawo zomzimba ezikulungeleyo ukuzinxiba. Kule meko, sithetha ngentsingiselo yentyatyambo efana ne-peony. Kuqwalaselwa njengentyatyambo yobutyebi kunye nobuninzi, kunye nenhlanhla.
Ewe kunjalo, ineentsingiselo ezimangalisayo. Kuyatshiwo ukuba luphawu lokuthatha umngcipheko. Into efana nokuzama ukufikelela kwimiceli mngeni ethile ebomini. Mhlawumbi kungenxa yokuba kwakhona yile ntyatyambo ikwanayo nentsingiselo efihlakeleyo ngobomi kunye nexesha elifutshane esinokubonwabela ngalo.
Nangona ukuthandabuza kunokuhlala kuvela, Iitattoo ezineentyatyambo azenzelwanga abasetyhini kuphela. Ungasoloko ukhetha uyilo oludibeneyo olunobuntu obungaphezulu, kodwa apho nazo zidityanisiwe. Ngoku lithuba lentyatyambo ekuthiwa yiAmaryllis. Kuthiwa enye yeentsingiselo zokuqala ezinikwe yona kukuba neentloni.
Ewe kunjalo, kukho eyahlukileyo okwahlukileyo. Uloyiso yintsingiselo enkulu yentyatyambo iAmaryllis. Siyacacisa ukuba ayifani kwaphela nemfazwe okanye ukungqubana, kodwa inokuthathwa iye kwezinye iindawo zobomi bethu. Ke xa sibuza malunga nophawu lwayo, sishiywe kukuzinikezela nokuzinikela.
Nangona kunjalo uqalo sisityalo, kwezi zintyatyambo zinomtsalane. Ngokuqinisekileyo, ngenxa yoko, bekufanele ukuba phakathi kokukhethwa kweentyatyambo zaseJapan. Ukubaluleka kwesi sityalo kubalulekile kwinkcubeko yaso. Ukongeza, xa kufikwa kwiitattoos, sinokuthi inentsingiselo enkulu: ubomi obude.
Nangona sibona indlela isiqu sayo esithanda ukugoba ngayo, ayophuli. Ke, yenye yezona mpawu zomeleleyo nezomeleleyo. Kungoko sinokuyamkela le ntsingiselo ukuba sicinga ukuyinxiba emzimbeni. nawe unako kufanekisela indlela yobomikunye namandla. Yintoni oyithandayo kuzo zonke?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Iitattoos zeentyatyambo eziphambili zaseJapan
Iitattoo zentliziyo emnweni
Ingcuka ibanga inyanga, uphawu lwayo kwiinkcubeko zonke